Indlela yokulinganisa, ukunqanda kunye nokunciphisa amaxabiso aphezulu okulahla inqwelo yokuthenga | Martech Zone
Ndihlala ndimangalisiwe xa ndidibana nomthengi ngenkqubo yokuphuma kwi-intanethi kwaye bambalwa kangakanani kubo abaye bazama ukuthenga kwindawo yabo! Omnye wabathengi bethu abatsha wayenesiza abatyala kuso itoni yemali kwaye ngamanyathelo ama-5 okusuka kwiphepha lasekhaya ukuya kwinqwelo yokuthenga. Ngummangaliso ukuba nabani na wenza kude kangaka!
Yintoni ukulahlwa kwinqwelo othengela kuyo?
Ingavakala njengombuzo wokuqala, kodwa kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ukushiya inqwelo yokuthenga asiyiyo yonke undwendwe kwindawo yakho ye-ecommerce. Ukulahlwa kwinqwelo yokuthenga kuphela ziindwendwe ezongeze imveliso kwinqwelo yokuthenga kwaye zangagqiba ukuthengwa kweso seshoni.
Ukulahlwa kwinqwelo yokuthenga kuxa umthengi onokubakho eqala ukujonga inkqubo ye-intanethi kodwa aphume kwinkqubo ngaphambi kokugqiba ukuthenga.
Abathengi abaninzi baya kukhangela kwaye bongeze iimveliso kwinqwelo yokuthenga ngaphandle kwenjongo yokuthenga. Banokunqwenela ukubona nje isambuku semveliso, okanye iindleko eziqikelelweyo zokuhambisa ngenqanawa, okanye umhla wokuhanjiswa… kukho itoni yezizathu ezisemthethweni zokuba kutheni abantu belahla inqwelo yokuthenga.
Uyibala njani iNqanaba lakho lokuThengisa inqwelo yokuThengisa
I-formula yokuthenga inqanaba lokulahla inqwelo yokuthenga:
Ulinganisa njani i-Cart yokuShiya kwi-Analytics
Ukuba usebenzisa iGoogle Analytics kwindawo yakho ye-ecommerce, kuya kufuneka ukuseta umkhondo we-ecommerce Kwindawo yakho. Ungalifumana inqanaba lokulahla inqwelo yakho yokuthenga kunye neenkcukacha kwiinguqulelo> i-Ecommerce> Ukuziphatha okuThengayo:
Qaphela ukuba kukho iindlela ezimbini ezahlukeneyo:
Ukulahlwa kwinqwelo - le yivenkile ethe yongeza imveliso kwinqwelo kodwa ayikugqibi ukuthenga.
Jonga ukuShiya - le yivenkile eqale inkqubo yokukhangela kodwa emva koko ingagqibi ukuthenga.
Kukho elinye igama kwishishini ngokunjalo:
Khangela incwadi yokuShiya -Le yivenkile - ebhaliswe ngokwenyani- ephequlula indawo yakho kodwa engakhange ifake naziphi na iimveliso kwinqwelo kwaye ishiye nje indawo.
Uthini umyinge wokulahla inqwelo yokuthenga?
Lumka kunye avareji amaxabiso kulo naluphi na uhlobo lobalo. Abathengi bakho banokwahluka kubuchule babo bobuchwephesha, okanye kunxibelelwano lwabo, okanye kukhuphiswano lwakho. Ngelixa esi sisiseko esihle, ndingathanda ukujonga ngakumbi imeko yenqanaba lokulahla inqwelo yakho yokuthenga.
Umndilili wehlabathi -Ireyithi ye-avareji yehlabathi yokulahla inqwelo ngama-75.6%.
Umndilili oSelfowuni I-85.65% yinqanaba lokulahla eliqhelekileyo kwiifowuni eziphathwayo.
Ukuphulukana nokuThengiswa Iimpawu zilahleka ukuya kuthi ga kwi-18 yezigidigidi ngonyaka kwingeniso evela kwiinqwelo zokuthenga ezishiyiweyo.
Athini amaxabiso erhafu yokuthenga inqwelo yokuthenga?
Le datha ithathwa kwiindawo ezingaphezu kwe-500 ze-ecommerce kunye namanqanaba okulahla abantu kumacandelo amathandathu aphambili Ukuthengisacle.
ezezimali - une-83.6% yenqanaba lokulahla inqwelo yokuthenga.
Ukungenzi Inzuzo - une-83.1% yenqanaba lokulahla inqwelo yokuthenga.
hamba - une-81.7% yenqanaba lokulahla inqwelo yokuthenga.
Ivenkile -Unama-72.8% kwinqanaba lokushiya inqwelo yokuthenga.
ifashoni -Unama-68.3% kwinqanaba lokushiya inqwelo yokuthenga.
Gaming -Unama-64.2% kwinqanaba lokushiya inqwelo yokuthenga.
Kutheni abantu belahla iinqwelo zokuthenga?
Ngaphandle kwezizathu ezisemthethweni, kukho izinto onokuthi uziphucule kumava akho enqwelo yokuthenga ukunciphisa izinga lokushiya:
Phucula isantya sephepha lakho -47% yabathengi balindele ukuba iphepha lewebhu lilayishwe kwimizuzwana emibini okanye ngaphantsi.
Iindleko eziphezulu zokuhambisa ngenqanawe -44% yabathengi bayishiya inqwelo ngenxa yeendleko eziphezulu zokuhambisa ngenqanawe.
Ukuthintela ixesha - 27% yabathengi bayishiya inqwelo ngenxa yexesha.
Akukho lwazi lokuhambisa -22% yabathengi bayishiya inqwelo ngenxa yokungabikho kolwazi lokuhambisa
Iphelile kwisitokhwe - Iipesenti ezili-15 zabathengi azizukugqibezela ukuthenga kuba into iphelile.
Inkcazo engeyiyo ngemveliso - Iipesenti ezi-3 zabathengi azizukugqibezela ukuthenga ngenxa yokudideka kolwazi lwemveliso.
Imicimbi yokulungiswa kwentlawulo - Iipesenti ezi-2 zabathengi abagqibi ukuthenga ngenxa yemicimbi yokulungisa intlawulo.
Ndicebisa elam icebo, elibizwa ngokuba yi- Uvavanyo lwe-15 kunye ne-50… Fumana i- Uneminyaka eyi-15 intombazana kunye ne-50 yeminyaka ubudala Ndoda ukuthenga into kwindawo yakho. Nika ingqalelo kwindlela abayenze ngayo kunye nokuba ibikhathaza njani. Uya kuyifumana itoni ngokuzijonga! Awunakukuphepha ukushiywa ngokupheleleyo, kodwa ungakunciphisa.
Indlela yokuNciphisa ukulahlwa kwinqwelo othengela kuyo
Kubalulekile ekunciphiseni inqwelo yokuthenga ukoyisa intsebenzo, ulwazi kunye nemicimbi yokuthembela ngasentla. Oku kuninzi kunokuphuculwa ngokuphucula iphepha lokuphuma.
ukwenza -Vavanya kwaye uphucule ukusebenza kwephepha lakho kuzo zombini iidesktop kunye neselfowuni. Qiniseka ukuba ulayisha uvavanyo kwindawo yakho-abantu abaninzi bavavanya indawo engenazo iindwendwe ezininzi… kwaye xa bonke besiza, indawo iyaqhekeka.
mobile -Qinisekisa ukuba amava akho eselfowuni aphezulu kwaye alula. Iifayile ezicacileyo, ezinkulu, ezichaseneyo ezinamaphepha alula kunye nokuhamba kwenkqubo kubaluleke kakhulu kumanqanaba okuguqula iselfowuni.
Inkqubela phambili - bonisa umthengi wakho ukuba mangaphi amanyathelo okugqibezela ukuthenga ukuze bangakhathazeki.
Iifowuni zokuSebenza -Icacileyo, uthelekiso lweefowuni zokuthatha isenzo eziqhuba i-shopper ngenkqubo yokuthenga ibalulekile.
Access Ukuhamba ngokucacileyo okuvumela umntu ukuba abuyele kwiphepha langaphambili okanye abuyele ekuthengeni ngaphandle kokuphulukana nenkqubela phambili.
Ulwazi lomkhiqizo -Bonelela ngemibono emininzi, ukusondeza, ukusetyenziswa, kunye neenkcukacha zomkhiqizo ezingenisiweyo kunye nemifanekiso ukuze abathengi bazithembe ukuba bayayifumana into abayifunayo.
Nceda -Bonelela ngeenombolo zefowuni, incoko, kunye nokuncedisa ukuthenga kubathengi.
Ubungqina boluntu - faka ubungqina boluntu imiqondiso efana neepopups kunye nokuphononongwa kwabathengi kunye nobungqina bokuba abanye abathengi bakuthembile.
zokuhlawula - Yongeza zonke iindlela zokuhlawula okanye zokuxhasa ngemali ukunciphisa imiba yokulungisa intlawulo.
Iibheji zokhuseleko -Bonelela ngeebheji ezivela kuphicotho lomntu wesithathu ezenza abathengi bakho bazi ukuba indawo yakho iqinisekisiwe ngaphandle ukuze ikhuseleke.
Ukuhambisa ngenqanawe -Bonelela ngeendlela zokufaka ikhowudi ye-zip kunye nokufumana amaxesha kunye neendleko zokuthumela ngenqanawe.
Gcina ixesha elizayo -Bonelela ngeendlela zokundwendwela ukugcina inqwelo yabo kamva, yongeze kuluhlu lwezifiso, okanye ufumane izikhumbuzo ze-imeyile kwiimveliso zesitokhwe.
Ingxamiseko -Bonelela ngezaphulelo ezinxulumene nexesha okanye unikezelo lwenjongo yokuphuma yokunyusa amaxabiso okuguqula.
ubhaliso -Akudingi naluphi na ulwazi kunokuba ufuneka ekuphumeni. Nika ubhaliso nje ukuba umthengi uye wahlolwa, kodwa ungabanyanzeli kwinkqubo.
Ungazifumana Njani Iinqwelo Zokuthenga Ezilahliweyo?
Kukho amaqonga okuzenzekelayo ngaphandle apho abamba kunye ne-imeyile abathengi ababhalisiweyo kwindawo yakho. Ukuthumela isikhumbuzi semihla ngemihla kwivenkile yakho yokuthenga ngeenkcukacha zezinto ezisenqwelweni yabo yindlela entle yokubabuyisela.
Ngamanye amaxesha umthengi ulinda nje ukuba ahlawulwe ukuze bagqibe ukuthenga. I-imeyile yokulahla inqwelo yokuthenga ayisiyogaxekile, zihlala ziluncedo. Kwaye unokwenza umnxeba onamandla kwisenzo kwi-imeyile yakho ukuze uyeke ukukhunjuzwa ngaloo nqwelo. Siyacebisa Klaviyo or Inqwelo enkulu olu hlobo lokuzenzekelayo. Baye banayo ukukhangela ukushiya kwaye Izikhumbuzi eziphume esitokisini kwiinkqubo zabo zokuzenzekelayo!
Le infographic evela Monate ineengcebiso ezintle malunga nokuphucula inkqubo yakho yokuphuma kunye nokunciphisa ukushiya inqwelo yokuthenga. Basebenzisa igama elithi “thintela” andikholelwa ukuba lichanekile, nangona kunjalo. Akukho namnye unako kuphepha Ukulahlwa kwenqwelo yokuthenga kwiwebhusayithi yabo ye-ecommerce.
tags: ukulahlwathintela ukulahlwaukukhangela ukushiyaukulahlwa kwenqwelojonga ukushiyaiphepha lokuphumaUyilo lwephepha lokuphumaInkqubo yephepha lokuphumae-commerceeCommerceukufumana kwakhona ukulahlwa kwenqwelo yokuthengaukunciphisa ukulahla inqwelo yokuthengaisikhoji sokuthengaUkulahlwa kwinqwelo othengela kuyoamanani okulahla inqwelo yokuthenga
Novemba 22, 2011 ngo-12: 50 PM
Ukuthanda iplagi yeBuff.
Novemba 22, 2011 ngo-8: 23 PM
Ndiyavuma, kuyamangalisa ukuba abantu "abazami ukupheka" okanye babukele abanye bezama ukuthenga.
Elinye inqaku elibethe ekhaya lalifihle ibhokisi yokunyusa yekhowudi. Ndidla ngokubheyila kwaye ndizama ukufumana ikhowudi okanye ukufumana enye indawo enexabiso eliphantsi.
Nov 23, 2011 kwi-8: 17 AM
Uthande uvavanyo lwe-15 kunye nolwama-50!
Nov 23, 2011 kwi-9: 48 AM
Ewe, akukho nto ithethwa kakhulu kuneminyaka eli-15 ubudala kunye neminyaka engama-50 ubudala